Pokemon Go waxaa loo tixgeliyaa ciyaar mobilada ugu fiican taariikhda | Wararka IPhone
Kaliya waxaa la heli karay laba toddobaad, xaqiiqdii meel aad u gaaban, maadaama laga heli karo oo keliya Mareykanka, New Zealand, Boqortooyada Ingiriiska iyo Australia. Sidaas oo ay tahay, haddaba waan xaqiijin karnaa taas Pokémon Go wuxuu noqday ciyaarta ugu caansan ee mobilka taariikhda Mareykanka, oo sidaas darteed waxay ku dambayn doontaa inay noqoto ciyaartii ugu fiicnayd ee abid abid abid abid la soo gaarto. Ma garanayno sida waqtigu u dhacayo u saameyn doono Pokémon Go, waxa aan dhihi karno waa inay abuurtay qandho run ah oo adkaan doonta in lagu qanciyo. Kooxda Niantic ee gacanta Nintendo waxay garanayaan sida wax loo qabto si aad u wanaagsan.
Faa'iidada ugu badan ayaa ah Nintendo, oo aragtay in qiimaha suuqyadiisu ay kor u kaceen qiyaastii boqolkiiba 56. Pokémon Go hadda wuxuu leeyahay in kabadan 21 milyan oo isticmaale firfircoon, in ka badan 20 milyan Candy Saga sanadka 2013, taasna shaki la'aan way sii kordheysaa sida ugu dhakhsaha badan markay si rasmi ah u bilawdo inay gaarto dalalka intiisa kale, hase yeeshe, dadka sida ugu cabsi badan ee isticmaala sidaan oo kale waxay durba bilaabeen inay ku soo dejistaan ​​qaab kale, Casharkaan waxaan ku tusineynaa sida loo soo dejiyo Pokémon Go for iPhone. Qaabkeena rakibida fudud ayaa runtii caan noqday wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad ku raaxeysato ciyaarta Spain.
Waxaas oo dhan iyada oo la tixgelinayo dhibaatooyinka ka imanaya server-yada iyo xaddiga badan ee cayayaanka ee ciyaarta la liita. Si kastaba ha noqotee, waxaa habboon in waqti fiican la helo dhammaantood. Goobaha jimicsiga ee magaalooyinka (Pokémon dabcan) waxay bilaabayaan inay yeeshaan hogaamiyeyaal run ah oo leh xoogaa xoog leh Pokémon, way adkaan doontaa in laga takhaluso. Ma jiro qof sifiican oo dhan buuqan u qabanaya marka loo eego Nintendo, kaliya waqtigiisii ​​oo ay aad ugu badneyd qashin-qubka, waxay umuuqataa inay xaqiiqdii dooneyso inay shirkada siiso xoogaa horumar ah, taas oo waxaan rajeyneynaa inay kaa caawineyso inaad wax ku saxdo Nintendo NX ama waxay ku dambayn doontaa inay ku degto qaab Nokia run ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Pokemon Go waxaa loo tixgeliyaa ciyaarta moobiilka ugu fiican abid
In kabadan wararka iphone tan durba waxay umuuqataa »wararka Pokemon»
Jawaab William Torres
Maaha wax aan jirin, laakiin sadarka ugu dambeeya wuxuu leeyahay ur ...
Gabi ahaanba waa BEEN in ciyaarta ay leedahay cilado (falanqeyntu waxay si sax ah u muujineysaa maqnaanshaha Khayaamada, marka laga reebo 1 ee soo galida Google, inay sabab u tahay xaqiiqda ah in saldhiga lagu sameeyay lagu tijaabiyay 3 Sano ... ) markaa waa khiyaano adigu gebi ahaanba been. Ma dhahayo, falanqaynta guud ee arjiga ee warbaahinta kaladuwan ayaa leh. Dhinaca kale, waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo haddii adiga Pokemon Go ay kaa buuxdo Cayayaanka, markaa waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aad u qeexi lahayd ios8 iyo iOS9….
"Waxaan rajeyneynaa inay kaa caawineyso inaad wax ku saxdo Nintendo NX ama waxay ku dhamaan doontaa qaabka Nokia ee runta ah." Aynu aragno haddii aan wax yar dhexdhexaad ka nahay, maxaa yeelay faallooyinkan ayaa ah rashka. Waxay ila tahay wax layaab leh aniga oo ah in qof Apple Apple ah uu yiri, maxaa yeelay kani waa weedha had iyo jeer u heellan Apple si loogu dhigo afar sheeko qiimo cusub. Nintendo waa shirkadda leh siyaasad shirkadeed oo la mid ah Apple, sidaa darteed waxaad ogaan doontaa wax markii ay abuureyso boqortooyo madadaalo elektaroonig ah muddo tobanaan sano ah, oo kacaan ka sameyneysa warshadaha isla markaana dib u habeyn ugu sameyneysa sida Apple ay ula sameysay iPhone-ka
Sidaas wax yar oo ka sii daran oo ku saabsan shirkadda ikhtiraacday madaxa madaxa kontoroolka, kaas oo ikhtiraacay gariirka inta lagu jiro ciyaarta, taas oo wax ka bedeshay cayaaraha fiidiyowga ee Super Mario 64, oo sii daayay ciyaartii ugu fiicneyd abid » , kaas oo ku beddelay wershadaha Wii, oo hadda uun ku beddelay ciyaarta mobilada Pokemon GO muddo 7 maalmood ah oo keliya.
Haddii aad tixgeliso in tani ay tahay lakabka Nintendo ee dhacay, markaa Apple wuxuu ku dhow yahay inuu ku baabi'iyo dhibco iibka ah, koritaanka eber, iPad-ka ayaa burburay, Mac-yada dabaqa, iyo Saacadaha aan ahayn garoonkii Apple doonayay. Xaqiiqda ku maaree kalabar, dhammaanteen waan ognahay.
- Servers si joogto ah u burbura
- Dhamaan isticmaaleyaasha aan aqaano waxaa soo maray khasaaro Pokemons ah maxaa yeelay ciyaarta ayaa qaboojisay PokeBall
- Fooxa badanaa waa la lumiyaa ka dib shubista
- Bilowga Google wuxuu lumay 2 × 3 kasta
- GPS waxay kuu dhigeysaa 200m badda dhexdeeda maadama aadan taxadar laheyn
Waan sii socon karaa, laakiin waxay siisaa maqaal.
By the way, markay arkeen inaad tahay qof taageersan Nintendo, waa inaad ogaataa in waxa kaliya ee Nintendo ay ku leedahay ciyaartan ay tahay xaqa isticmaalka Pokémon iyo magacyadooda. Soo-saaraha waa Niantic, oo ay leedahay Alphabet INC (Google), waa wax aan horey dhowr jeer ugu sheegnay halkan.
Ma dhihi karo dhibaatooyinka Nintendo, waxaa leh madaxweynahooda oo lagu qasbay inuu hoos u dhigo mushaarkiisa in ka badan kala bar: http://www.meristation.com/nintendo-wii-u/noticias/el-presidente-de-nintendo-se-reduce-el-sueldo-a-la-mitad-por-las-ventas-de-wii-u/1365/1952938
Bal qiyaas sida saamiyaduhu u ahaayeen kuwa kor u kacay 86% toddobaadyadan ... Nintendo wuxuu ka maqnaa suuqa muddo sannado ah, iyo haddii aad, sida iska cad NintendoFanboy (in haddii aad ogaan lahayd ururinta alaabooyinka Nintendo ee aan haysto, laga yaabee inay beddeli lahayd eedayn aan macquul ahayn) xisaab ma aadan siinin, yaa bixin doona.
Hagaag, hadii hada ay tahay ciyaarta ugu fiican ee moobilku jiro, laga yaabee inaad ubaahantahay inaad la dagaasho pokemonka si aad ugaarsato, inaad awoodo inaad la dagaalanto isticmaaleyaasha kale hadii aad kula kulanto wadada ama asxaabtaada oo aad sameysid tartamo. dhig tan waxaad cuni doontaa dhammeystir ahaan isku dhaca royale oo hadda ah ciyaarta boqorka
Miyuu dhab ahaantii yahay ciyaartii ugu fiicneyd abid? Sida loo sheegay?
Ciyaaraha fiidiyowga waxay leeyihiin shaqooyin farshaxan oo sax ah, cajiib ah, waxaan ku qori karaa boqolaal ciyaartii ugu horreysay ee aan layaabay nidaamka sayidka (wiilka yaabka leh III), cajaa'ibyada ku saabsan gawaarida gawaarida sida aagga majaajillada, ciyaarihii lasoo dhaafay ee saldhigga ciyaarta sida khiyaaliga VII. Ama iyada oo aan loo sii soconin jiilkan oo leh ciyaaro sida saaxirad, dhac 4, istiraatiijiyad waqtiga-dhabta ah sida xiddigta 2. Iyo kulankaan, oo sida cusub u dhexgalaa xaqiiqda la kordhiyay (oo MA AH ciyaartii ugu horreysay ee sidaas sameysa), waa ciyaarta ugu fiican taariikhda? Ciyaar micropayments ah?
Waa maxay ciyaar fudud, uma baahnid inaad wax badan qabato, ma haysato sannado wax lagu ogaanayo sida cajaa'ibyada kale ee aadamuhu abuuray.
Sabab? Micno malahan
Waa xushmad darro warshadaha ciyaarta fiidiyowga. Ixtiraam la'aan sega, konami, EA, atari, bethesa ... Iyo dheer iwm, in la yiraahdo Pokemon waa ciyaartii abid ugu fiicneyd. Hadalkaas waxaan u arkaa wax laga xumaado, murugo iyo qoomamo. Waan ka xumahay inaan inbadan isku celiyo, laakiin macquul maahan in la rumaysto.
"Ciyaarta mobilada ugu fiican", aan aqrino qoraalka oo dhameystiran. Isbarbardhig ganacsade sida Fallout 4 ama Dark Souls 3, oo leh ciyaar caadi ah, madax iyo dabadaba midna ma lihid. Waa ciyaarta ugu wanaagsan ee mobilada maxaa yeelay adeegsadayaashu sidaas ayey go'aansadeen, iyaga oo ku ciyaaraya.